Barakacayaal Horleh oo ku qul qulaya Xeryaha Qaxooti ee Magaalada Gaalkacyo – SBC
Barakacayaal Horleh oo ku qul qulaya Xeryaha Qaxooti ee Magaalada Gaalkacyo
Magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug waxaa Maalmihii ugu dambeysay ku soo qul qulayay dad Barakacayaal ah oo ka iminaya deegaanadii ay degenaayeen maadaama ay saameyn buuxda ku yeelatay Abaarta ka taagan gobolada Koonfureed ee dalka iyo Colaadaha taaganba.
Kaamka lagu magacaabo Buulo Bacley ee ku yaala Magaalada Gaalkacyo ayaa ay si aad ah ugu qulqulayaan Qoysaskan Barakacayaasha ah, iyadoo dadkii horay xeradaasi ugu jiray ay ku heysteen dhibaatooyin dhanka nolosha ah.
Gudoomiyaha Kaamka buulo Bacley oo la hadlay Xafiiska SBC International ee gobolka Mudug ayaa u sheegay in dadkani ay ku soo beegmeen xili ay jirto xaalado nololeed oo heysata dadka xerada uu gudoomiyaha ka yahay ku jira.
Cabdi Maxamed oo loo yaqaan Cabdi biyoole gudoomiyaha Kaamka Buulo Bacley waxa uu intaasi ku daray in qoysaskan soo gaaray oo ah kuwo aad u tiro badan islamarkaana ay heysato xaalado Macluuleed oo ka dhashay safaradii ay so galeen iyo abaarta ku soo dhufatay ay iminka soo buuxdhaafiyeen kaamka .
Mar uu ka jawaabayay su’aal ku aadaneyd in ay jiraan cid gar gaar u sameysay ayuu sheegay in waayadii la soo dhaafay xerada dadka ku jira ay hay’adaha samafalka siin jireen cunooyin balse xiligan oo ay dadkani soo gaareen aysan jirin cuno ku filan oo ay heystaan.
Sikastaba ha ahaatee Barakacayaashaan cusub ayaa waxa ay imaanayaan xili kuwii ka sii horeeyay ay ku dhibaataysan yihiin Gudaha Magaaladda Gaalkacyo, Ayadoona lagu guda jiro Bisha Barakaysan ee Ramadaan.